Marxaladda dambe ee socdaalka duulimaadka hawada ee dunidu wuxuu noqon doonaa mid arxan daran
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Marxaladda dambe ee socdaalka duulimaadka hawada ee dunidu wuxuu noqon doonaa mid arxan daran
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • News • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Ku soo noqoshada diyaarad ka dib COVID-19 waxay la mid tahay barashada duulista mar kale.
Mustaqbalka duulimaadku isku mid ma noqon doono, qaarna waxay leeyihiin safarku wuxuu noqonayaa mid arxan darro ah.
Waraaqaha joogtada ah ayaa dhammaantood la kulmay cadhada iyo niyad -jabka ku dheggan laamiga. Iyada oo ay dadku mar kale u qaadanayaan cirka “saaxiibtinimo” tiro aad u badan, dib -u -dhacyo aad uga badan kuwii caadiga ahaa ayaa la filayaa.
Duulimaadkii aad filaysay inuu noqdo 45 daqiiqo wuxuu isu beddelaa safar saacado badan leh oo feedh-ruxaya. Maaddaama niyadda diyaaradda ay sii xumaanayso oo ay sii xumaanayso, dadku waxay inta badan isweydiiyaan "Tani dhab ahaan ma sharci baa?"
Jawaabta aadan rabin inaad maqasho ayaa ah in haantaada laamiga ah ay u badan tahay inay tahay mid sharci ah, mustaqbalka dhowna laga yaabo, inay maxkamaduhu u janjeeraan inay siiyaan duulimaadyo ka badan inta ay guud ahaan ku siin lahaayeen sharciga.
Waaxda Gaadiidka ee Maraykanka (DOT) waxay leedahay sharciyo cusub oo ku saabsan inta diyaarad loo oggol yahay inay ku sugnaato laamiga iyo shuruudaha. Wax -ka -beddelka xeerarkan laamiga ah ayaa dib u bilaabmay sannadkii 2016 -kii oo dhaqan -galay sannadkan oo keliya. Markaa mid ka mid ah isbeddelada qaanuunka ma aha mid uu dhiirrigeliyay masiibada.
Si kasta oo ay tahay diyaaradda, iyada oo aan loo eegin haddii ay tahay mareykanka ama shisheeyaha, duulimaad gudaha ah wuxuu fadhiisan karaa laamiga wax ka badan saddex saacadood. Duulimaadyada caalamiga ah, xadka waa afar saacadood.
Waxaa loo baahan yahay in hal mar lagu dhawaaqo haanta laamiga oo ku taal sumadda 30-ka daqiiqo. Kadib, laba saacadood, xeerarku waxay dhigayaan in rakaabka la siiyo biyo, cunto, iyo daryeel caafimaad diyaaradda haddii loo baahdo. Waxa kale oo jira shuruud ah in musqulaha diyaaradda si buuxda u shaqaynayaan.
Ugu dambayn, mar haddii calaamadda saddex/afar-saac ay dhacdo, rakaabku waxay xaq u leeyihiin inay ka baxaan diyaaradda. Badanaa, marka tani dhacdo, duulimaadka si fudud ayaa loo joojiyaa dib -u -dhacyo dheeraad ah (sida baahida loo qabo in laga saaro bacaha la hubiyay iyo sidoo kale wixii dhibaato ah ee saacadaha shaqaaluhu soo bixi karaan).
Marka la eego in tani tahay safarka hawada, dabcan, waxaa jira waxyaabo ka reeban. Waxa ugu badan waa halka duuliyuhu go'aansado in diyaaraddu u baahan tahay inay ku sii jirto laamiga sababo ammaan dartood. Waxa kale oo muhiim u ah rakaabka inay fahmaan in saacadda dib -u -dhigga laamiga ay bilaabmayso oo keliya marka aadan awoodin inaad ka baxdo diyaaradda. Haddii aad fadhido albaabka, albaabku wuu furan yahay oo rakaabku way ka soo degi karaan duulimaadka, saacaddu weli ma bilaaban.
Adriana Gonzalez, garyaqaan Florida ah, wuxuu na xusuusinayaa in xitaa halka ay diyaaraduhu dareemi karaan inay haystaan ​​sababo macquul ah oo ay ku dheereeyaan dib -u -dhigga laamiga, waa inaanan waligeen ku khasaarin arrinta ugu muhiimsan halkan:
“Shirkadaha duulimaadku waxay sheegan karaan inay buuxinayaan dhammaan shuruudaha sharciga ah ee a laamiga hold waxay noqon doontaa, macno ahaan, aad u dhib badan, maadaama ay dib u dhimayaan adeegga duulimaadka inta lagu jiro aafada. Duulimaadyadu waxay u baahan doonaan inay noqdaan kuwo dabacsan marka ay u jawaabayaan rakaabka dhibaataysan oo u baahan inay ka baxaan diyaaradda ka hor wakhtiga xeerarka caadiga ah ee laamiga ah la adeegsan doono. Caafimaadka iyo badbaadada rakaabku waa inay had iyo jeer noqdaan kuwa ugu horreeya. ”
Laga soo bilaabo aragtida shirkadaha diyaaradaha, waxay noqotay mid aad u dhib badan in la maamulo duulimaad kasta. Kaliya maahan halista sii kordheysa ee shaqaalaha duulimaadka ah ee ku dhex wareegaya qolka iyo qabashada adeegga caadiga ah, waa carqaladeynta silsiladda sahayda. Maaha wax kasta oo loogu adeego duullimaadyada tirada loo baahan yahay ayaa diyaar u ah maanta sida ay ahayd horaantii 2020. In kasta oo dadka safarka ah ay u baahnaan doonaan in ay noqdaan kuwo dabacsan halka arrimahan sahaydu saameynayaan oo kaliya waxyaabaha wanaagsan in la helo (sida xulashada caadiga ah ee Cunto fudud ama haddii diyaaraduhu ku bixiyaan khamriga duulimaadka), waxa kaliya ee aan marnaba la hurayn waa badbaado.
Dib -u -dhac kasta oo laamiga ah waqtiyada ugu fiican wuxuu arkaa in jawiga dushiisa uu noqdo mid caadifad badan saacad kasta oo diyaaradda dhulka taal. Si aad uga tagto rakaabka oo ruxaya niyad -jabka si aad u jilayso oo aad u yeelato xaalad kacsan oo dul saaran waa wax ay diyaaraduhu u baahan yihiin inay aad uga warqabaan oo ay u nugul yihiin dhawrka bilood ee soo socda. Maadaama aan dhammaanteen isku dayeyno inaan baranno safarka hawada mar kale, shirkadaha duullimaadyadu waa inaysan raacin oo keliya dhammaan xeerarka loogu talagalay badbaadada rakaabka laakiin ay ku qaldamaan dhinaca dhaafitaanka iyaga.
Intee in le'eg ayaan nabad qabnaa labaatan sano kadib Sebtember 11 ...
Royal Caribbean waxay u keentaa doonyo cusub Jamaica gudaha ...
Golaha Guud ee UNWTO oo hadda ku sugan Madrid: Zurab ...
10ka meelood ee ugu sarreeya safarada socdaalka kali ah sanadkan
Booqo Britain Hadda waxaadna ku biiri kartaa Maamulaha ETOA Tom ...
Hoos u tiriso NASA SpaceX Crew-3 Lift Off
Cabsi? Duulimaadka Air India A320 ee Delhi ilaa Kabul
Logan Levi wuxuu leeyahay,
September 25, 2021 at 05: 19
Talooyinkayaga socdaalka ee caalamiga ah ayaa weli ah 'Ha safrin' sababtoo ah halista caafimaad ee dambiyada rabshadaha iyo kufsiga ee PNG ayaa sarreeya. Macluumaadka ku saabsan imtixaannada cusub iyo shuruudaha maaskaro, xannibaadaha safarka iyo beddelidda safarkaaga. Haddii safarkaagu ku lug leeyahay socdaal, diyaarad ama safar wax iibsi. https://higherrank.net/